जलवायु परिवर्तनको असर- अन्टार्टिकामा पाइने हिमाली लाटोकोशेरो वासिंगटन घुम्दै
२०७९ जेठ १५ आइतबार / Sunday, May 29, 2022
न्युयोर्क । अन्टार्टिका महादेशमा मात्र पाइने दुर्लभ लाटोकोशेर अमेरिकाको राजधानी वासिंगटन डीसीमा नै फेला परेको छ । यही ३ जनवरीमा वासिंगटन डीसीमा सो दुर्लभ चरा अमेरिकाको मुटुमा देखिएको हो ।
हिमाली लाटोकोशेरो डुल्दा वासिंगटनमा ८ इन्च बाक्लो हिउँ परेको थियो । सो लाटोकोशेर वासिंगटनको क्यापिटोल हिल, युनियन स्टेसन, नेसनल पोस्टल म्युजियम र अमेरिकी संसदका भवनहरुका साथै प्रहरी मुख्यालयमा देखिएको छ ।
बस्दाखेरी फुटबल आकारको गोलो देखिएको चम्किलो आँखा भएको सो चरालाई तस्विरमा कैद र हेर्ने क्रममा गत साता दर्जनौं मानिसहरुको क्यामेरा र बाइनाकुलर हिउँले ढाकेको थियो । रेल स्टेसनको प्रवेशद्धारमा ग्रीकका प्रख्यात गणितज्ञको मूर्तिको टाउकोमाथि सो लाटोकोशेरो बसेको थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली लाटोकोशेरो सहरमा निर्वाध डुलेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
‘जलवायु परिवर्तनका कारण अन्टार्टिकाबाट हिउँमा बस्ने लाटोकोशेरो मानिसहरुको घना बस्ती भएको ठाउँमा आउन थालेका छन्, ’ गैरसरकारी परियोजना स्नोस्ट्रोमका अनुसन्धानकर्ता स्कट विडेनसल भन्छन् । स्नोस्ट्रोमले हिमाली लाटोकोशेरका गतिविधिको पहिचान गर्दै आएको छ ।
हरेक हिउँदको मौसममा केही लाटोकोशेरा दक्षिणमा बसाइँ सर्ने भए पनि तथ्यांक भने यकिन नभएको उनी बताउँछन् । करिव तीनदेखि पाँच वर्षयता लाटोकोशेरोको मुख्य खानेकुरा लेमिङ (मुसोजस्तो जनावर) को संख्या घटेसँग हिउँमा बस्ने लाटोकोशेरा बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दो छ ।
अधिकांश हिउँदमा उत्तर अमेरिकाको हिमाली लाटोकोशेरो ग्रेट लेक्स वा केप कोल्ड क्षेत्रभन्दा धेरै तल नझर्ने विडनसाउन बताउँछन् । ‘तर, आक्रमण हुँदा भने उनीहरुले सामान्यभन्दा अझै दक्षिणी क्षेत्रमा बसाइँ सर्छन्,’ उनी भन्छन् ।
पूर्व र माथिल्लो मध्यपश्चिमी क्षेत्रमा देखिएका जवान चराहरुमध्ये अधिकांश हिउँमा पाइने लाटोकोशेरो छन् । पक्षीहरुको निरीक्षकर्ताहरुको समूहले प्रयोग गर्ने गैरसरकारी मञ्च इबर्डका अनुसार यो हिउँदे मौसममा कन्सास, मिसोउरी, टेनेसा, नर्थ क्यारोलिना र म्यारिल्यान्डमा हिमाली लाटोकोशेरा फेला परेका छन् ।
अमेरिकाको मुटुमा फेला पर्न थालेपछि लाटोकोशेरोले अधिकांश चराचुरुङ्गीप्रेमीको ध्यान तानेको छ ।
यात्रुबाहक सुपरसोनिक विमानको परिक्षण
काठमाडौँ । कोनकोर्ड रिटायर्ड भएको लगभग दुई दशक पछि यात्रु उडान गर्नसक्ने सुपरसोनिक विमान फेरी संचालनमा आउने भएको छ । गत सोमबार यस उत्साहको एक झलक देखिएको छ, जब विमान
कठिन परिस्थितिमा अँगालो हाल्दा तनाव कम !
काठमाडौँ । यदि कसैले तपाईंलाई कठिन परिस्थितिमा अँगालो हाल्छ भने, तनाव कम महसुस हुन्छ । अमेरिकामा गरिएको एक अनुसन्धानले यहि निष्कर्ष निकालेको छ । यो महिलाको सन्दर्भमा झन् बढी हुने अनुसन्धानले
आज बुद्ध जयन्ती
काठमाडौँ । प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने बुद्धजयन्ती पर्व आज भगवान् विष्णुको नवौँ अवतारका रुपमा जन्म लिनुभएका सिद्धार्थ गौतमको पूजा आराधना प्रवचन गरी मनाइँदै छ । सिद्धार्थ गौतमले विश्व
अब दिमागमा रोबोट पठाइने, कस्तो रोगको हुनेछ उपचार ?
काठमाडौँ । मानिसको दिमागमा रोबोट पठाएर मानसिक रोग निको पार्ने कुरा कुनै विज्ञान कथा फिल्मको कथा जस्तो लागे पनि अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रहेको बायोनट ल्याब्सले यसलाई वास्तविकतामा ल्याउने काम गरिरहेको छ
अमेरिकामा प्रत्येक साढे दुई घण्टामा बन्दुकबाट एक बालबालिकाको मृत्यु !
विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने हाम्रो साझा उद्देश्य हो- प्रधानमन्त्री देउवा
आज गणतन्त्र दिवस
रियल म्याड्रिडले जित्यो च्याम्पियन्स लिगको उपाधि
आजको राशिफल: २०७९ साल जेठ १५ गते आइतवार
६२१ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग
आइतबार बजेट आउदै
यूक्रेनका पूर्वराष्ट्रपति पोरोशेन्कोलाई देश छोड्न रोक
आर्थिक सर्वेक्षण- अर्थतन्त्र ५.८४ प्रतिशतले विस्तार हुने